Ciidamada Maamulka 'Somaliland' Oo Si Adag Udifaacday Gacan Ku Heynta Deegaanka Tukaraq.
Sunday January 28, 2018 - 16:29:50 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo maanta barqadii markale dib uga qarxay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool.
sawir kore oo laga qaaday Tukaraq
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada maamulka 'Puntland' ay weerar xooggan ku qaadeen saldhigyada ciidamada 'Somaliland' ee Tukaraq, dagaallo culus oo ay ka qeyb qaadanayeen gaadiidka Tiknikada ayaa ka dhacay wadada laamiga ah ee deegaanka Marta illaa iyo halka loo yaqaan Kastamka.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta madaafiicda iyo rasaas xooggan oo lays dhaafsanayay, wararka ka imaanaya Tukaraq ayaa xaqiijinaya in ciidamada maamulka Hargeysa ay si adag udifaacdeen gacan ku heynta deegaanka halka ciidamadii maamulka Garoowe ay dib ugu gurteen goobtii ay kasoo duullaan tageen.
Khasaara dhimasho iyo dhaawac ah ayaa kala gaaray dhinacyadii dagaallamay, ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada maamulka 'Puntland' ay hadda ku suganyihiin tuulo 25KM ujirta Tukaraq halka ciidamada maamulka 'Somaliland' ay gacanta ku hayaan dhammaan deegaannadii lagu dagaallamay.
Dagaalkan ayaa imaanaya xilli Cabdi Wali Gaas looga yeeray magaalada Addis Ababa halkaas oo lafilayo in Itoobiya ay ku dhax dhaxaadiso labada maamul ee isku hayo gacan ku heynta deegaanno katirsan gobollada Sool iyo Sanaag.
Wasiirro Hor leh oo iska casilay Maamulka 'Koonfur Galbeed'.